शनिबार , २४ श्रावण २०७७
बिहीबार श्रावण १५, २०७७/ Thursday 07-30-20
बेइजिङ, एएफपी – चीनको स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी हुवावेले यस वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा स्मार्टफोन बिक्रीमा नयाँ विश्व रेकर्ड कायम गरेको छ । स्मार्टफोन बिक्रीको अनुगमन गर्ने क्यानालिसका अनुसार हुवावेले सामसुङलाई पछि पार्दै पहिलो पटक नयाँ रेकर्ड बनाएको हो ।
क्यानालिसका अनुसार अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको हुवावेले ५ करोड ५८ लाख थान स्मार्टफोन अन्यत्र पठाएको छ । जबकी सामसुङले यही अवधिमा ५ करोड ३७ लाख थान स्मार्टफोन निर्यात गरेको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण हुवावेका मोबाइल सेटहरुको विदेशमा बिक्री घटेको छ, तर स्वदेशमा हुवावेका सेटहरुको माग तिब्र छ । हुवावेका सेटहरुमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी चीनमै बिक्री भइरहेका छन्, क्यानालिसले जनाएको छ ।
दुरसंचार नेटवर्किङ उपकरण उत्पादनमा बर्चश्व कायम गर्न थालेको हुवावेलाई लिएर संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनबीच विवाद पनि बढेको छ । अमेरिकाले हुवावेका कारण विश्वमै साइबर सुरक्षामा चुनौती खडा हुने चेतावनी दिँदै आएको छ । अमेरिकाले हालैमात्र हुवावेलाई अमेरिकी बजारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने यस कम्पनीलाई एक्ल्याउन विश्वव्यापी अभियान नै संचालन गरिरहेको छ ।
हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर (तालिकासहित)
फेरि एक हजारले बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् आजको बजार भाउ
बलिउडकी यी अभिनेत्रीले पनि पासो लगाएर ज्यान फालिन्
डा. रवीन्द्र पाण्डे भन्छन् - सरकार कोरोनाको उपदेश तीतो हुन लाग्यो
बलिउड अभिनेत्री मिनिषाले गरिन् डिभोर्स
पर्साका एक मेयरसहित थप ५५ जनामा कोरोना संक्रमण
प्रधानमन्त्री ओलीसँग अयोध्याका विषयमा छलफल गर्न माडीको टोली काठमाडौं आउदै
अभिनेता अनमोल केसीको कोरोना रिपोर्ट यस्तो आयो
भाटभटेनी सुपर मार्केटका एक कर्मचारीमा देखियो कोरोना
काठमाडौं १५ दिनका लागि सटडाउन, के के गर्न पाइन्न ?
कपनमा बालिका फ्याँकिएको खबर गलत, आमाकै मिलोमतोमा नाटक गरेको रहस्य खुल्यो